CIYAAR KALA BAX AH: Xiriirrada kubadda cagta Yurub iyo Ameerika oo mabda’ ahaan isku raacay arrin muhim ah! (UEFA vs Conmebol) – Gool FM
RASMI: Atletico Madrid oo ku dhawaaqday saxiixa Axel Witsel
Laporta oo inta lagu guda jiray xafladda soo dhaweynta Franck Kessie ka hadlay mustaqbalka De Jong
Zlatan Ibrahimovic oo go’aan ka gaaray mustaqbalkiisa kooxda AC Milan
Man United oo lagu dhaleeceeyay bixitaanka Ronaldo
Halyeey Chelsea ah oo muujiyay saxiixa faa’iido badan ugu jirto Blues… (Ma Ronaldo, Sterling, mise Neymar?)
Pogba oo qarka u saaran inuu dib ugu laabto Juventus… (Xilliga uu tijaabada caafimaad marayo oo la ogaaday)
RASMI: Man United oo ku dhawaaqday inay dhammeystirtay heshiiska Tyrell Malacia
DEG-DEG: PSG oo ceyrisay Mauricio Pochettino kaddib 18-bilood oo uu maamulayay kooxda
CIYAAR KALA BAX AH: Xiriirrada kubadda cagta Yurub iyo Ameerika oo mabda’ ahaan isku raacay arrin muhim ah! (UEFA vs Conmebol)
Raage June 30, 2016
(Assuncion) 30 Juunyo 2016 – Chile, ayaa dhowaantan ku guulaystey Koobka Ameerika, wuxuuna wajihi doonaa xulkii hanta Koobka Qaramada Yurub ee Euro 2016 si ay u yeeshaan ciyaar xiise badan oo kala bax ah oo lagu go’aamin doono wax lagu sheegay xulka adduunka.
Waxaa mubaadaradan keenay xiriirka kubadda cagta Latin Ameerika ee Conmebol, taasoo ay u badan tahay inay soo dhowayso UEFA, sida uu ku dhawaaqay madaxayna Conmebol ee Alejandro Dominguez.
Koobkan ayaa la mid noqon doona sida midkii la baabi’iyey ee Toyota Intercontinental Cup (oo ahaa koob ay ku faltamaan kooxaha kala haysta Champions League iyo Copa Libertadores kahor intaan laga dhigin FIFA Club World Club kaasoo kooxo kale lagu soo daray).
“Waxaannu jawaab wanaagsan ka helnay UEFA oo aan u bandhignay in la abaabulo kulan caalami ah oo dhexmara xulka qaada Koobka Ameerika iyo midka hanta Koobka Qaramada Yurub ee Euro. Haatan waxaannu isla raadinaynaa goortii iyo goobtii lagu dheeli lahaa ciyaarta” ayuu soo tweet-gareeyay Alejandro Dominguez.
Barcelona oo markii ugu horaysay ka hadashay go'aankii Messi uu uga fariistay ciyaaraha caalamiga ah
CAQLI BADANAA: Bal DAAWO jawaabta Mesut Ozil mar la waydiiyay su’aasha ma dhammaatada ah ee kee fiican Ronaldo iyo Messi?!!!!